Umbria, ikhaya elisemaphandleni kufutshane ne-Assisi Spoleto
Ifulethi kwindlu yasefama emaphandleni ase-Umbria kufuphi neNocera Umbra, umgama wemizuzu engama-30 ukusuka e-Assisi naseGubbio naseSpoleto.
Indlu ineholo yokungena enkulu enegumbi lokuhlala kunye nekhitshi. Kukho amagumbi amabini okulala: elinye linebhedi enkulu ephindwe kabini, iwadilophu kunye nesifuba sedrowa, enye ineebhedi ezintathu zomntu omnye (iibhedi ezimbini ezibhedi). Le ndlu inegumbi lokuhlambela elineshawa kunye nomatshini wokuhlamba, igumbi lokugcina.
Indlu ikwilali yase-Umbrian, ikwindawo yodwa kodwa ayiyedwanga. Ithe cwaka kakhulu, ineembono zepanoramic ukusuka kumagumbi okulala. Yindawo efanelekileyo yokuqalisa imisebenzi emininzi: ukuhambahamba emasimini nakwiindledlana kunye nohambo lokuphumla entliziyweni yasendle yase-Umbria; ukutyelela izixeko zobugcisa Umbria, ezifana Assisi, Perugia, Gubbio, Spoleto okanye Trevi, Bevagna, Spello.
NGEXESHA LASEBUSIKA, ikhephu ukusuka ngoDisemba ukuya kuFebruwari likhethekile ngokuhlala kwakho. Kuthi cwaka noxolo. Siziqhelanisa nokutyibiliza ekhephini kwindawo ekufutshane yaseGualdo Tadino naseCostacciano. Ukuhla, izihlalo zi-Ussita (Marche) okanye ifolokhwe yaseCanapine eNorcia, zombini malunga nemizuzu engama-90 ukusuka kwindawo yokulala.
IINKONZO -- Isithuthi sikawonke-wonke esikufutshane yibhasi ehamba kwindlela enkulu (eyayifudula iVia Flaminia): indawo yokumisa ibhasi imalunga nemizuzu elishumi ukusuka ekhaya. Isikhululo sikaloliwe siseNocera Umbra (imizuzu eyi-15 ngemoto, imizuzu engama-40 ngebhasi).
Unokuthenga kunye neemfuno ezincinci: idolophana ekufutshane yiGaifana, imizuzu eyi-10 ngeenyawo. IGaifana kukho ivenkile encinci, iivenkile ezimbini, ibhari, iposi kunye nebhanki eneATM.
Sirenta yonke indlu nge-40 Euros ngobusuku kwaye sinokuhlala abantu aba-5.